बिशेष रिपोर्ट | KTM Khabar
एजेन्सी । गुगलको मेसेजिङ एपका लागि यो वर्ष न् २०१८ खासै सुखद रहेन । किनकी गुगलले यहीँ वर्ष आफ्नो मेसेजिङ एप बन्द गर्ने घोषणा गर्यो । तर वर्षको अन्त्यतिर भने गुगलका लागि केही सुखद खबर प्राप्त भएको छ । किनकी गुगलको एउटा भिडियो कलिङ तथा मेसेजिङ एपका प्रयोगकर्ताको संख्या १ अर्ब नाघेको छ । गुगलको भिडियो कलिङ तथा मेसेजिङ एप लाई गुगल प्ले स्टोरमार्फत १ अर्ब भन्दा बढि पटक डाउनलोड गरिएको छ । एन्ड्रोइड पोलिसको रिपोर्ट अनुसार डिसेम्बर महिनाको सुरुमै डुओ एप ...
काठमाडौं । नेपाली कामदारहरु रोजगारीका लागि जापान जान पाउने भएका छन् । जापान सरकारले मंगलबार विदेशी कामदार भित्र्याउने उद्देश्यसहित नीतिगत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । देशभर एक सय वटा परामर्श केन्द्र खोलिने छ, जसले नेपाली सहित ११ भाषामा सहायता प्रदान गर्नेछन् । कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ । न ...
काठमाडौँ । विश्व किर्तिमानीका लागि स्टेम फाउन्डेशन नेपाल र वाताबरण विभागको संयुक्त आयोजनामा बुधबार राजधानीको टुडिखेलमा प्रयोगमा आईसकेका प्लास्टिकको झोलाहरुबाट मृत सागरको आकृति बनाईएको छ । विभिन्न संघ, संस्था एवं नदिको किनाराहरुबाट संकलन गरिएको ८७ हजार २३२ थान प्लास्टिकको झोलाहरुबाट मृत सागरको आकृति बनाईएको हो । बुधबार मध्यान्ह १२ बजेदेखी प्लास्टिकलाई बाध्दै मृत सागरको आकृति बनाउँन सुरु गरिएको थियो भने सोही दिन बेलुका सम्पन्न भएको थियो । शहरी विक ...
विनयीको दोश्रो पुस्तक ‘विद्यार्थी जनआन्दोलन डायरी ०६२–६३’ सार्वजनिक (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । कपनमा रहेको जुगल इंग्लिस मिडियम स्कुलका प्रिन्सिपल विवेक विनयीले आफ्नो दोश्रो पुस्तक ‘विद्यार्थी जनआन्दोलन डायरी ०६२–६३’ सार्वजनिक गरेका छन् । शनिबार चाबहिलमा रहेको एवान पार्टी प्यालेसमा ‘विद्यार्थी जनआन्दोलन डायरी ०६२–६३ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम’ को आयोजना गर्दै पुस्तक सार्वजनिक गरिएको थियो । छहारी पब्लिकेसनबाट प्रकाशन गरिएको उक्त पुस्तकलाई पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पु ...
काठमाडौं । सन् २०२० का लागि अमेरिका जाने भाग्यचिट्ठा ‘डाइभर्सिटी भिसा ‘(डिभी) को बुधबार रातिबाट आवेदन खुला भएको छ । आवेदन भर्न नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले सूचना जारी गरेको छ । दूतावासका अनुसार २०२० का लागि डिभीको आवेदन बुधबार राति ९ः४५ बजेबाट नै खुला भएको हो । आवेदन कात्तिक २० गते राति १०ः४५ बजेसम्म खुला रहने जनाइएको छ । धेरैले डिभी भर्ने केन्द्र र पसलहरुमा गएर शुल्क तिरेर भर्ने गरेका छन् । तर डिभी भर्न कुनै पनि शुल्क नलाग् ...
ओम कुमारको पहिलो पुस्तक ‘यात्रा सफलताको’ सार्वजनिक (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । युवा लेखक ओम कुमार मगरद्धारा लिखित पहिलो पुस्तक ‘यात्रा सफलताको’ सार्वजनिक भएको छ । शनिबार बौद्ध स्थित होटल टिबेटमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरिएको हो । मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधिस खिलराज रेग्किो प्रमुख आतिथ्यतामा गरिएको उक्त पुस्तकको लोकर्पण कार्यक्रममा बरिष्ठ साहित्यकार युवराज नयाघरे, डा. योगी विकाशानन्द लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । पुस्तकमा विभिन्न ...
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित ताज महल नजिकै आगराको सडकमा सुतिरहेको कुकुरमाथि कालोपत्रे गरिएको छ ।सुतिरहेको कुकुरमाथि सडक कालोपत्रे गरेपछि अहिले भाइरल बनिरहेको छ । कुकुरको आधा शरीरसमेत पिच गरिएको छ । सुतिरहेको कुकुरमाथि तातो अलकत्रा र रोडा खन्याएर सडकमा नै आधा शरीर पिच गरेपछि कुकुरको ज्यान गएको छ । रोलरले थिचेपछि आधा शरीर जलेको अवस्थामा त्यो कुकुरलाई निकालिएको थियो । बेलायती सञ्चारमाध्यम मीररको अनुसार कुकुरको पछाडिको खुट्टो पुरै जलेको थिय ...
यि हुन् श्रीमान, श्रीमतीको शंका गर्ने बानी ?, जानी राखौ
यदि तपाईकी श्रीमती वा श्रीमानले तपाईमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको भए यसलाई अन्यथा ढंगले नलिनुस् । बरु तपाई आफ्नो दिनचर्यामा केही परिवर्तन ल्याउने कोशिस गर्नुस । हालै गरिएको एउटा अध्ययनले निद्राको कमीका कारण पनि मानिसमा शंका गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने गर्दछ । अध्ययनका अनुसार पर्याप्त निद्रा नपुगेको अवस्थामा मानिसमा शंका गर्ने प्रवृक्ति विकास हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा तपाईको पार्टनरले पनि त्यस्तो गर्न लागेका छन् भने तपाईले उनको निद्रा पूरा गर्ने व ...
धुन्चे, रसुवा। चप्पल फाटेर प्वालै प्वाल परेका छन् । शरीर ढाकेको कपडा ठाउँ ठाउँमा उध्रिँदै गएका छन् । टोपीदेखि पैतालासम्मका कपडा धुलाम्मे छन् – सुपा तामाङका । चरम गरिबीको स्पष्ट झल्को शरीर ढाक्ने लुगाले दिइरहेको थियो । तर ४८ वर्षीय सुपाले सन्तानप्रति पोख्नुभएको माया, ममता र वात्सल्य समाजका लागि उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । उहाँले यहाँस्थित जिल्ला अस्पतालको शैयामा मृत्युसँग जुधिरहेकी आफ्नी सुत्केरी छोरी र नवजात शिशुलाई थप उपचार गर्न निजी खर्चमा क ...
पर्सलाई धेरैजसो मानिसले आफ्नो पछाडिको खल्तीमा राख्ने गर्दछन् । यदि तपाईं पनि यस्तै गर्नुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो यो बानी तुरुन्तै हटाउनु पर्नेछ नभए विभिन्न रोगको शिकार हुनुपर्छ । पर्समा हामी पैसाको साटो विभिन्न कार्ड, सिक्का, आइडीलगायतका वस्तु राख्छौं जसले पर्स निकै मोटो बनाउँछ । यस्तोमा यदि तपाईंले पछाडिको खल्तीमा यस्ता मोटो पर्स राख्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको शरिरको तल्लो भागको ब्यालेन्स बिगार्ने गर्दछ । त्यसकारण पछाडिको खल्तीमा पर्स राख्दा तपाईंल ...
बिरालोसँग जोडिएको केहि अशुभ अन्धविश्वास हो या सत्य यस कुरालाई लिएर प्रायः मानिसहरु अन्योलमा रहने गर्दछन् । जब कुनै बिरालोले बाटो काट्छ तब मानिसहरु त्यहिं रोकिने गर्दछन् र आफू भन्दा अघि अरु कोही जाउन भनेर प्रतीक्षा गर्ने गर्दछन् । कहिले–काही मानिसहरु डरले आफ्नो बाटो नै बदल्ने गर्दछन् । आखिर यस्तो किन ? यसको व्याख्या यस्तो रहेको छ । बिरालोलाई मांसाहारी, जंगली र अशुभ जानवर मानिएको छ । नारद र वराह पुराणको शुभ–अशुभको बारेमा बिरालोलाई लिएर ...
वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड फोटो पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा प्रतिष्ठित अवार्ड हो। अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालीले जित्न नसकेको यो अवार्ड शुक्रबार घोषणा गरिएको हो। भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस माडुरोबिरूद्ध भएको हिंशात्कम संघर्षको क्रममा शरीरमा आगो लागेका युवकको फोटोले यस वर्षको विश्व प्रेस फोटो अफ द इयरको उपाधि जित्यो। यो तस्बिरलाई जुनस वेक्टरले खिचेका हुन्। हेर्नुहोस विभिन्न विधामा पुरस्कार जित्न सफल केही फोटोहरुः ...
काठमाडौँ । वाइल्डलाईफ अर्थात वन्य जीवन झल्काउने यी तस्बिरहरुले धेरैको मन जितेको छ । वाइल्डलाइफ फोटोग्राफरका क्यामेराले कैद गरेका यी तस्बिरले विश्वभर चर्चा पाए । हेर्दै निकै रोमाञ्चक लाग्ने यी तस्बिर विश्वका विभिन्न भूगोलमा फरकफरक फोटोग्राफरले खिचेका हुन्। एजेन्सी ...
काठमाडौं : यो पटकको निर्वाचनबाट करिब एक दर्जन दम्पति सांसद बनेका छन् । अधिकांश पति प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुँदा पत्नीहरु समानुपातिकबाट सांसद् बनेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबाट संसदमा बन्ने दम्पति धेरै छन् । मधेसी दलबाट पनि दम्पति सांसद बनेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि यस निर्वाचनमा १० भाग्यमानी जोडीले सांसद हुने अवसर पाएका हुन् । जसमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पाँच, नेकपा एमालेबाट चार र राष्ट्रिय जनता पार्टी न ...
यि हुन् योगगुरु रामदेवको खानेकुराहरु ?, त्यसैले उनी अहिलेसम्म फिट छन्
काठमाडौँ । रामदेव योगगुरुका रूपमा विश्वभर परिचित छन् । उनी थुप्रै देशमा योग सिकाउँदै आएका छन् । खाने कला सिकाउँछन् । उनी आफैँ पनि अहिलेसम्म फिट छन् । रामदेव आफैँचाहिँ के खान्छन् त ? – रामदेव बिहान एक गिलास तातो पानी पिउँछन् । त्यसपछि ५ देखि ८ बजेसम्म योगा गर्छन् । – योगापछि तातो पानीसँग अमला र एलोभेराको जुस पिउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो उमेरका मानिसको आधा कपाल सेतो भइसक्छ । तर, यस्तो जुस पिएकै कारण मेरो कपाल अहिलेसम्म पनि कालो नै ...
रक्सी पिएपछि अंग्रेजी किन बोल्छन् ?
रक्सी पिएपछि कहिल्यै अंग्रेजी नबोलेका मानिसले पनि फरर यो भाषा बोल्न थाल्छन् । अरू बेला फिटिक्कै नबोल्नेले एक्कासी अंग्रेजी बोल्न थालेपछि माहौल नै फरक हुने गर्छ । रक्सी पिएपछि मानिस किन यसरी अँग्रेजी बोल्छन् त ? बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले यसको कारण पत्ता लगाएको छ । रक्सी पिएपछि मानिसको आत्मविश्वास बढ्ने र तनाव बढ्ने उक्त अध्यययले देखाएको हो । अध्ययनका अनुसार आत्मविश्वास बढ्ने र तनाव घट्ने भएपछि मानिस अरुसँग नडराउने गर्छन् र फलस्वरूप मानिसले अरूस ...
यौनक्रिडामा मस्त भएको पार्कमा घुम्न आउनेमा युवतीहरु नै बढि (फोटोफिचर)
दक्षिण कोरियामा एउटा यस्तो पार्क छ जहाँ जताततै यौनका भावहरु झल्कन्छन् । सन २००७ देखि सञ्चालनमा आएको उक्त पार्क मा यौनक्रिडामा मस्त भएका मुर्तीहरु नै रहेका छन् । जनु हत्तपत्त देख्दा हरकोही जिब्रो नै टोक्ने खाल्का छन् । जहाँ यौन क्रिडा गरिरहेको , मुख मैथुन गरेको र पुरुषका लिंगहरु भएका थुप्रै मुर्तीहरु छन् । रोचक कुरा त के छ भने उक्त पार्क घुम्न आउने मध्ये ६० प्रतिशत युवती नै हुने गरेको समाचारमा जनाइएको छ । उक्त पार्क घुम्न अहिले देश विदेशबाट पर्यट ...
काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ः गगन कि राजन ?
काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गगन कुमार थापा र नेकपा एमालेका उम्मेदवार डा. राजन भट्टराईले यत्ति बेला मुलक कै ध्यान केन्द्रित गरि रहेका छन् । संसदिय नीतिमा आवश्यक ठानिएका तर पार्टी निर्णयले एउटै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परे पछी काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ का मतदाताहरु पनि स्वयम् कसलाई मतदान गर्ने ? भन्ने अन्योलमा परेका छन् । थापा र भट्टराई दुवै निवर्तमान सांसद एवं आशा लाग्दा र उदयमान नेत ...
बिनाको जीवनका ती प्रकाश सँधैका लागि निभे ! (तस्विरहरु)
काठमाडौ । आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा कञ्चनपुरबाट उम्मेदवार बनेकी माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा प्रकाश दाहालकी पत्नी बिना मगर शनिबार पनि चुनाबी कार्यक्रममा सहभागी भएर सुतेकी थिइन । चुनाब नजिकिएका कारण उनी चुनाबी गतिविधिमै व्यस्त थिइन । आइतबार हुने चुनाबी कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने योजनाका साथ सुतेकी विनाको जिवनमा आइतबार कालो दिन बनेर आयो । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा बिनाका ससुरा समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आ ...
छोरालाई आइन्स्टाइनको चिठी
सन् १९१५ । प्रथम विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो । प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन त्यतिखेर विश्वयुद्धको चपेटामा परेको जर्मनीमा थिए । ३६ वर्षीय आइन्स्टाइन आफ्ना वैज्ञानिक खोजहरूमा व्यस्त थिए । उनीसँग छुट्टिइसकेकी श्रीमती मिलेभा आफ्ना दुई छोरा हयान्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन र एडवार्ड ‘टेटे’ आइन्स्टाइनका साथ तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएको अस्ट्रियाको भियनामा बस्थिन् । त्यसै वर्ष आइन्स्टाइनले आफ्नो विख्यात सापेक्षताको सिद्धान्तको प्रतिपादन ...
काठमाडौँ ७ का मतदाताहरुले किन रामविरलाई मतदान गर्ने ?, यस्तो छ चुनावी एजेण्डा !
काठमाडौँ । काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ७ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेकपा एमालेका नेता रामविर मानन्धर चुनाबि मैदानमा रहेका छन् । दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी नेतृ हिसिला यमीलाई पराजित गर्दै राष्ट्रिय राजनितिमा चर्चामा आएका मानन्धरलाई नै वाम गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाका लागि उमेद्वार वनाएको छ । उनी यतिखेर जितका लागि आफ्ना एजेण्डा र भावि योजना लिएर मतदाता कहाँ पुगिरहेका छन् ।उक्त क्षेत्रमा मानन्धरको व्यक्तिगत लोकप्रियता र प्रभाव त ...
यस्तो रह्यो गगनको जगडोल क्षेत्रको घरदैलो कार्यक्रम (फोटोफिचर)
२३ कात्तिक– काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा उम्मेदवार रहेका पूर्व–स्वास्थ्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रय सदस्य गगन थापा आफ्नो चुनावी कार्यक्रममा क्रियाशिल भएका छन् । आइतबारदेखि मतदाताको घर–घरमा पुगेर मत माग्दै हिडेका थापाले बुधबार कपनको विभिन्न क्षेत्रका बस्तिहरुमा पुगेर जनतासंग भोट मागे । बुधबार कपन भित्र चुनावी प्रचारमा लागेका गगन दिउँसोको समयमा राष्ट्रिय शहिद तथा निजामती पार्क परिसरको जगडोल क्षेत ...
इतिहासमा चुनावः श्रृंखला-१ नेपालमा २०१५ सालमा पहिलो पटक संसदको निर्वाचन भएको थियो। त्यसपछि ३३ वर्षपछि २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो। त्यसयता संसद र संविधानसभाका चार वटा निर्वाचन भइसकेका छन्। हामी सातौँ संसदीय चुनावको संघारमा छौं। यस अवसरमा हामीले इतिहासमा चुनाव श्रृंखला शुरू गरेका छौं। ५९ वर्षअघि नेपालमा भएको चुनाव कस्तो थियो? कसरी भएको थियो? कति चरणमा गरिएको थियो। कसले जितेका थिए? यो श्रृंखलाको पहिलो भागमा यिनै विषय समेटिनेछन्। नेपालको पहिलो आम नि ...
२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा गणेशमान सिंह क्षेत्र नं १ काठमाडौंबाट उम्मेदवार बनेका थिए । राणा शासनका विरुद्ध ज्यानको बाजी लगाएर लामो संघर्ष गरेका सिंह २००७ सालपछि पटक–पटक मन्त्री पनि भइसकेका थिए। कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अनि काठमाडौंका स्थानीय भएकोले काठमाडैंमा उनको सहज जित अनुमान गरिएको थियो। शुरुमा उनले काठमाडौं बाहेक देशका अन्य भागमा पनि कांग्रेसका पक्षमा चुनाव प्रचारमा जाने योजना बनाएका थिए। तर सिंह आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट बाहिर ...
विराटनगर महानगरका मेयर यसरी घस्रँदै पुगे छठ पूजा गर्न (फोटोफिचर)
विराटनगर । अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर बिहीबार देशभरि नै छठ पर्व मनाइएको छ । विराटनगरमा यस वर्ष भने छठ मनाउनेहरुको भीडमा विराटनगर महानगरका मेयर भीम पराजुलीले सबैको ध्यान उनी तिर तानेका छन् । छठको विशेष पूजा मात्र गरेनन् उनले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन डेढ किलोमिटर टाढासम्म घस्रदै पुगेका थिए । यो पूजाका लागि मेयर पराजुली बुधबारैदेखि पानीधरि नपिई निराहार व्रत पनि बसेका थिए । बिहीबार दिउँसो १ बजे विराटनगर–३ स्थित आफ्नो घर नजिकैको शिव पञ्चाय ...
रोबोट सोफिया किन बनिन् साउदी अरबकी नागरिक ?
सोफिया नाम गरेको रोबोट अहिले चर्चामा छ । नहोस पनि किन उसले आधिकारिक रुपमा साउदी अरेवियाको नागरिकता पाएको छ । धातु र तारबाट बनेको सोफिया पहिलो मानवीय रोबोट (हृयुनाइड रोबोट) हो जसलाई कुनै मुलुकले आफ्नो नागरिक बनाएको छ । साउदी अमेरिकी पब्लिक रिलेशन अफेयर्स कमिटीले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर हृयाण्डिलमा यसको पुष्टि गर्दै लेखेको छ, ‘रोबोट सोफिया संसारको पहिलो रोवोट बनेको जसले साउदी नागरिकता पाएको छ ।’ साउदी अरवको संस्कृति र सूचना मन्त्रालय मात ...
नेपालको इतिहासका निकै नै दुर्लभ तस्बिरहरु
काठमाडौं । राणाकालीन अनि शाहवंशी राजाहरुले शासन गर्दाताकाका विभिन्न तस्बिहरु जुन नेपालको इतिहासका निकै नै दुर्लभ तस्बिरहरु हुन् । प्रस्तुत छ साही तस्विरहरुः
आफ्नो क्षेत्रमा गगन सक्रिय
काठमाडौँ । यती बेला प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाब केन्द्रित गतिविधि बारे धेरैको लागि चासो बढ्न थालेको छ । विभिन्न दलका स्थानिय राजनीतिकर्मी तथा केन्द्रिय नेताहरु आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेका छन् । यस्तै चुनाबी रौनक काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ मा पनि बढी रहेको छ । गगन थापाको क्षेत्र भएकाले पनि देश कै चासोको केन्द्र रुपमा लिइन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ४ । अहिले गगन आफ्नो क्षेत्रका लागि आन्तरिक भेटघाट, सार्वजनिक सुनुवाइदेखी क्षेत्रका औपचारिक कार्य ...
सन् २०१९ को डाइभर्सिटी भिसा (डि.भी.) कार्यक्रमको लागि आवेदन दर्ता भोलीदेखि खुल्ने भएको नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले दिएको जानकारी अनुसार अवधि अक्टोबर ३, २०१७ (२०७४ असोज १७) मा (नेपालमा स्थानीय समयअनुसार रातको ९:४५ बजे) बाट सुरु हुने गरी खुल्नेछ। नोभेम्बर 7, २०1७ (२०७४ कार्तिक २१) बन्द हुनेछ । डिभीको लागि आवेदन दिँदा कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने दुतावासले जानकारी गराएको छ। त्यस्तै आवेदन भर्दा कन्सल्टेन्टको सहयोग नलिन आवेदनसम्बन्धी सहयो ...
विश्वका सबैभन्दा अस्वस्थ २० देशहरु
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन र विश्लेषण गर्ने बेलायती वेबसाइट क्लिनिक कम्पेएरले विश्वका सबैभन्दा अस्वस्थ देशहरुको सूचि तयार गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, सिआइए वल्र्ड फ्याक्टबुक तथा विश्व फोक्सो संस्थाबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा विश्वका १ सय ७९ वटा देशको विश्लेषण गरी अस्वस्थ देशहरुको सूचिकरण गरिएको हो । त्यसक्रममा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष मदिरा तथा सूर्ति सेवनका साथै मोटोपनालाई आधार लिइएको छ । यी सबै मापदण्डका आधारमा हरेक देशलाई निशि ...
धान रोप्दै वडाअध्यक्ष (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । आज असार पन्ध्र अर्थात राष्ट्रिय धान दिवस । कृषिप्रधान देश नेपाललाई विगत केही वर्षदेखि असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ । यसै अवसरमा बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर १० को आयोजनामा कपन स्थित बालुवाखानीमा रोपाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । 'बाँझो जमिनको पहिचान, वाली लगाउने अभियान' भन्ने मुल नाराको साथ आयोजना गरिएको रोपाई कार्यक्रममा बुनपा १० का वडाअध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडासदस्यहरु, स्थानिय महिला तथा वडाबासीहरुको उपस्थ ...
५ असार । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको आरोपमा १८ असोज ०५९ मा अक्षम घोषित हुँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि त्यसअघि नै स्थानीय निकाय भंग गरेको आरोप लागिसकेको थियो । ०५४ सालमा निर्वाचित भएका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ०५९ सालमा सकिँदै थियो । देउवा ६ साउन ०५८ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । उनको काँधमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी थियो । तर, त्य ...
१ असार । कालिकोटको जितेगडाबाट महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको बस बुधबार दैलेखको आठबीस नगरपालिका–४ नैनलदेव मन्दिरनजिक दुर्घटना हुँदा ११ को मृत्यु भएको छ । २१ घाइते भएका छन् । बस कर्णाली राजमार्गबाट तीन सय मिटर तल खसेर कर्णाली नदीमाथिको भीरमा अड्केको छ । मृतकमध्ये दशको सनाखत भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्काका अनुसार मृत्यु हुनेमा आठ पुरुष, दुई महिला र एक नाबालक छन् । बसमा ३२ यात्रु रहेको प्रारम्भिक जानकारी ...
यसरी सुटिङ भएको थियो ‘बाहुबली’ मा भल्लादेव र साँडेबिचको भयानक लडाईको दृश्य(फोटोफिचर)
बैशाख २४ – फिल्म ‘बाहुबली’ सन् २०१५ मा रिलिज भएको थियो र त्यतिबेलादेखि दर्शकको यो फिल्मप्रतिको रुची आकासियो । प्रशंसकलाई फिल्मको दोस्रो संस्करणको व्यग्र प्रतिक्षा थियो । फिल्म ‘बाहुबलीः द बिगनिङ’ मा एक दृश्य यस्तो थियो जसलाई थुप्रै मानिसहरुले याद गरे । थाहा पाउनुस् कसरी सुटिङ भएको थियो फिल्मको उक्त दृश्य (सबै तस्बिरः युट्युब) फिल्म ‘बाहुबली’ मा भल्लालदेव अर्थात् राणा दग्गुबत्ती साँढेसँग लडाईं गरिरहेको देख ...
यो हो रोबोट पत्रकार, एक सेकेन्डमै ३०० शब्दसम्म लेख्न सक्छ
पत्रकारितामा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ, त्यो हो रोबोट पत्रकार । पछिल्लो समय प्रविधिले नसोचेका उपलब्धि हासिल गरिरहेको समयमा चीनका वैज्ञानिकहरुले कम समयमा छिटो–छिटो लेख्न र पढ्नसक्ने रोबोट बनाएका छन् । चाइना डेलीका अनुसार सिओ नान नाम गरेको रोबोट पत्रकारले स्थानीय बसन्त महोत्सवकाबारेमा ३०० शब्दको लेख लेखेर प्रकाशित भएपछि सबैजना आश्चर्यमा परेका छन् । सिओ नान (रोबोट)ले लेखेको लेखलाई साउर्थन मेट्रोपोलीस डेलीमा प्रकाशित गरिएको थियो । पत्रकार सिओ नान ...
सलमान खानः डेब्यु- बीबी हो तो ऐसी (१९८८) सलमान खानबाट सुरु गरौं । हुन त उनी सालिम खानका छोरा हुन्, जसले आफ्नो जमानामा ‘नेम र फेम’ पाएका थिए । ब्लकबस्टर ‘शोले’ जस्ता फिल्मका सह(लेखन गरेका सालिम त्यस बखतका नामी स्क्रिप्ट राइटर हुन् । सलमान, उनै सालिमका छोरो । यद्यपी सलमानको पर्सनालिटी अहिले जति बोल्ड र ड्यासिङ देखिन्छ, सुरुवाती चरणमा त्यस्तो थिएन । उनी अलि ख्याउटे देखिन्थे, फिल्म ‘मैने प्यार किया’सम्म पनि । ...
यस्तो रह्यो साम्तेनमा युरोपियन कल्चरल समुह क्लाउन्जको प्रस्तुति (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । राजधानिको कपन स्थित कपनटारमा रहेको साम्तेन मेमोरियल एजुकेशनमा यहि चैत १० गते युरोपियन कल्चरल समुह क्लाउन्जले आफ्नो प्रस्तुति देखाएको छ । जर्मनी कलाकारको प्रस्तुतिमा पिस एण्ड फ्रेस एजुकेशनका लागि गरिएको कल्चरल तथा कमेडि कार्यक्रममा क्लाउन्जले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई लाइभ कमिडियन कला प्रस्तुत गरिएको थियो भने जादु पनि देखाईएको थियो । करिब एक घण्टाको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रममा स्कुलका विद्यार्थी तथा अभिभावकको उपस्थिति रहेको थियो । अन्तर ...
यसअघि तपाईले कहिल्यै नदेखेका १५ हवाइ तस्विर हेर्नुहोस्
१८ चैत । मेरिकी बैज्ञानिक संस्था नासाले धेरै कुरामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । उसले जल, जमिन देखि अन्तरिक्ष सबै क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । नासाले आफ्ना अनुसन्धान, अनुसन्धानमा पाएका र देखिएका कुरा समय समयमा सार्बजनिक गर्ने गर्छ । पछिल्लो समय नासाले अन्तरिक्षबाट खिचिएका अफ्रिका महादेशका विभिन्न तस्विर सार्वजनिक गरेको छ । हरौँ यसअघि तपाईले देख्न नपाउनुभएका अफ्रिका महादेशका केही तस्विरहरू । १. कायरो, इजिप्ट इजिप्टको कायरोको ...
अब फेसबुक लाइभबाट पनि पैसा कमाउन सकिने
अब फेसबुकको लाइभ भिडियोमा पनि विज्ञापन प्रकाशित हुने भएको छ । सिएनबिसीमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार फेसबुकले आफ्नो ब्लगमा लाइभ स्ट्रिमरहरुले आफ्नो भिडियोमा विज्ञापन राख्न पाउने सुविधा दिइने जनाएको छ । एक पटकमा २० सेकेण्डसम्म लामो हुने विज्ञापन भिडियो शुरु भएको ४ मिनेट पछि देखिने छ र त्यसपछि प्रत्येक ५ मिनेटको अन्तरालमा बज्नेछ । ‘फेसबुकमा हामी आफ्ना साझेदारहरुका लागि उत्पादनहरुको मुद्रीकरण र डिजिटल भिडियोका लागि विज्ञपान विकास गर्नका लागि प्र ...
राजधानिमा धुलाम्मे सडक, अब्यबस्थित सार्वजनिक यतायात ( हेर्नुहोस विशेष भिडियो रिपोर्ट )
काठमाण्डौ । धेरेैको सपनाको शहर हो काठमाण्डौ तर यहि बस्नेहरुका लागि दिनहुँ अब्यबस्थित धुलाम्मे शहर भएको छ । आखिर कहिले सम्म ?, गत शुक्रवार केटिएम खबर डटकमका लागि रवि भट्टराईले काठमाण्डौमा चल्ने सार्वजनिक यातायत र यसमा सवार यात्रुहरुको समस्या तथा चुुनौतीका विषयमा विशेष स्थलगत भिडियो रिपोटिङ तयार पारेका छन् ।धुलाम्मे सडकमा गुडेका गाडिहरु आम सर्वसाधारण मैत्री छन त ?, समय मै गन्तब्यमा पुर्याउछन त यात्रुहरुलाई ?, यात्रुहरु सन्तुष्ट छन् ?, यावत विषयमा ...
राजधानीमा अहिले पनि सामान ढुवानीका लागि गधाको प्रयोग गरिन्छ ( फोटो फिचर )
२६ पुस । काठमाडौँको सतुंगलमा रहेको एक इट्टा भट्टिमा मानब श्रमको विकल्पमा अहिले पनि गधाको प्रगोग गरिदै आइएको छ । सुन्दा अचम्म लाग्छ तर यो यथार्थ हो । जहा काचो इट्टाढुवानीका लागि गधाको सहायतामा आदान प्रदान गरिन्छ । के त्यहा सवारी साधन पुग्दैन र ? यो पनि यहाँलाई लाग्न सक्छ तर त्यो पनि हैन जहाँ सवारी साधन प्रसस्तै मात्रामा चल्छन तर पनि त्यहा काचो इट्टा बोक्नका लागि गधाको नै प्रयोग गर्दै आईरहेको छ । हेर्नुहोस केटिएम खबरका फोटो पत्रकार सुरज गौतमले कैद ...
नेपाल टेलिकमले आइतबार चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट सेवा 4G लन्च गरेको छ । हाल यो सेवा काठमाडौं र पोखरामा मात्र उपलब्ध हुनेछ । टेलिकमको 4G कसरी चलाउने भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ । जान्नुस् ७ कुराः मोवाइलमा 4G चल्छ कि चल्दैन कसरी जान्ने ? तपाईंको मोवाइल फोनको नेटवर्क सेटिङमा गई फोनले कुन-कुन प्रविधिमा काम गर्छ हेर्न सकिन्छ । उपलब्ध बिकल्पमध्ये 4G/LTE रहे नरहेको यकिन गर्नुहोस् । साथै नेपाल टेलिकमको नेकवर्कमा 4G/LTE सेवा सुचारु गर्नका ...
कुमार शर्मा, दक्षिण केरीया । रेमिट्यान्सले चलेको देश भनेर हामिले सुनेको मात्रै हैन यथार्थ पनी त्यस्तै छ । आज दैनिक रुपमा नेपालीहरु बिदेसिने क्रम तिव्र रुपमा बढिरहेको छ । नेपालीहरु धेरै संख्यामा कामदारको रुपमा र केही संख्यामा विधार्थीको रुपमा बिदेसिएको पाइन्छ । खाडी मुलुक देखी लियर युरोप, अमेरीका, कोरीया, जापान जस्ता देशहरु काम गर्न सक्ने उमेरका ४० लाख युवा युवतीहरु ती देशहरुलाई हराभरा बनाउन आफ्नो रगतलाई पसिना बगाउदै छन् । त्यस्तै गन्तव्य मध्येको ...
नायिकाबाट गायिका बन्ने लहरमा मिरा (फोटो फिचर)
पछील्लो समय नेपाली नायिकाहरु गायनमा पनि सकृय हुन थालेका छन । यही क्रमलाई पछ्छ्याउदै गुरुङ चलचित्रकी चर्चित नायिका मिरा गुरुङ अब गायिकामा पनि फड्को मारेकी छिन् । आधा दर्जन गुरुङ चलचित्रकी नायिका तथा अमेरिकन नेपाली कलाकार संघको भ्वाईस प्रेसीडेण्ट समेत रहेकी मिरा गुरुङ 'गुरुङ कि छोरी' गीत मार्फत गायनमा प्रबेश गरेकी हुन ।गुरुङ चलचित्रको 'उत्कृष्ट नायिका'को अवार्ड समेत हात पारीसकेकी मिराले यस् गीतमा लोक र गुरुङ भाषा फ्युजन गरेकी छिन् । झन्डै १ दर्जन भ ...
दिमाग घुमाइदिने तस्विर जसको वास्तविकता अर्कै छ (फोटो फिचर)
पछिल्लो समयमा इन्टरनेटमा यस्ता तस्विर अपलोड हुन्छन् जुन् एक पटक हेर्दा हाम्रो दिमाग घुम्छ । तर वास्तविकता थाहा पाउँदा भने हाँसो उठ्छ । यहाँ त्यस्तै तस्विर संकलन गरिएको छ । शताब्दीका सबैभन्दा चर्चित र विवादित ९ तस्विर : यी तस्विरको एंगलिङका कारण एक पटक हेर्दा तस्विर बुझ्न कठिन पर्छ । यी तस्विर फोटोसप गरेर तयार गरिएका होइनन् तर खिच्ने समयमा एंगलिङ भने गरिएका छन् । यो तस्विरमा २ महिला छन् । एकको शरीर ब्ल्याङ्केटमा लुकेको छ भने अर्कीको अनुहार छोपिएको ...
।।ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम।। अर्थात ब्राह्मण ब्रह्म (ईश्वर) तेजले युक्‍त हुन्छ। ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेयर्त्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ -पार. गृ.सू. २.२.११। जनैलार्इ उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रतबन्ध, बलबन्ध, मोनीबन्ध तथा ब्रह्मसूत्रका नामले चिनिन्छ। यसलार्इ उपनयन संस्कार पनि भनिन्छ। ‘उपनयन’ काे अर्थ हुन्छ, ‘सँगै वा सन्निकट लिएर अाउनु।’अब प्रश्न अ ...
अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ । शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिंगको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिंगको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिंगको अर्थ नपुसंकको प्रतीक भन्ने हुन्छ । आखिर के हो त शिवलिंग ...
अमेरिकाका ४४ राष्ट्रपतिका ४४ रोचक तथ्य
अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिंटन नोभेम्बर ८ मा हुने राष्ट्रपतिय चुनावले अमेरिका त गर्माएकै छ, सम्पूर्ण विश्वले पनि निकै चासो देखाइरहेको छ । विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकाका सबैभन्दा शक्तिशाली पद राष्ट्रपतिको पदमा आशिन हुने व्यक्ति चानचुने हुने कुरै भएन । त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपतिका हरेक आनीबानी तथा तथ्यहरु विश्वकै लागि मानक तथा उदाहरणका विषय बन्ने गरेका छन् । अमेरिकाका भूतपूर्व ४४ जना राष्ट्रपति र उनीहरु बारेका ४४ वटा रोचक तथ्य य ...
विश्वको सबैभन्दा ठूलो सोसल मिडिया वेबसाइट फेसबुक दिनहुँ कति मानिसले चलाउँछन् होला ? फेसबुकको कमाइ कति छ होला ? यो सायद चासोको विषय बन्न सक्छ । पौने दुई अर्ब भन्दा बढि प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकले हालै आफ्नो आय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा कम्पनीका प्रयोगकर्ताको तथ्यांक तथा अन्य सेवा तथा तथ्यहरुको खुलासा गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार हाल फेसबुकका सक्रिय प्रयोगकर्ताको संखया १ अर्ब ७९ करोड छ । सक्रिय प्रयोगकर्ता भनेको कम्तिमा महिनामा एक पटक फेसबुक ...
शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाको पुरानो एल्बम
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको समेत नेतृत्व गर्दै वि।सं। २०५२ सालमा पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । डडेलधुरा जिल्लाको पश्य गोर्खा क्षेत्रमा एक सम्पन्न परिवारका रूपमा रहेको शेरबहादुर देउवाको परिवारलाई डडेलधुरा क्षेत्रमा ठकुरी कुल भनेर चिन्छन् । प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका देउवा नेपाली कांग्रेसका सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिनु हुन्छ । हाल उनी नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति हुन् ।देउवाकी श ...
भारत बाट अबैध रुपमा ल्याउदै गरेको कुखुरा शसस्त्र प्रहरीद्वारा नष्ट (तस्विरमा हेर्नुहोस्)
रबिन्द्र यादव, १० कार्तिक, नवलपरासी । नवलपरासीको कठहवा नाका हुँदै भारत बाट अबैध रुपमा ल्याउदै गरेको अनुमानित ६० हजार बराबरको तयारी अवस्थामा रहेको कुखुरा शसस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोष्ट गुठी परसौनीको टोली पक्राउ गरि महेशपुर पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टका सेवा अधिकृत गिरीराज पौडेल, पत्रकार , स्थानियहरुको रोहबरमा नष्ट गरेको छ ।शसस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोष्ट गुठी परसौनी का इन्सपेक्टर पदम बहादुर पुन अनुसार विशेष सुराकीको अधारमा कुखुरा पक्राउ ग ...
एमालेको चियापान कार्यक्रममा बाबुराम देखि महन्त ठाकुरसम्म (फोटोफिचर)
३० असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेले विजया दशमीका अवसरमा आयोजना गरेको चियापान तथा सुभकामना कार्यक्रममा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पत्नी हिसिला यमी देखि मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरसम्म उपस्थित भएका छन् । राजनीतिक रुपमा एमालेसँग सम्बन्ध चिसिएका बेला मधेसी नेताले चियापानमा सहभागिता जनाएर मेलमिलापको सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।शंखपार्कमा आयोजना गरिएको चियापानमा मधेसी जनअधिकार फोरक लोकतान्त्रिकका नेता विजयकु ...
शंखपार्कमा तिजको रमझम (फोटोफिचर)
१९ भदौ, काठमाडौँ । काठमाडौँको शंखपार्क यतीखेर निकै नै तातेको छ । प्राय युवायुवतीको भिड लाग्ने यो ठाउँ आज रातो पहिरनमा सजिएका महिलाहरुले भरिएको छ ।हरितालीका तिजको अवसर पारेर शंखपार्क स्थित शिव मन्दिरमा पुजा गर्ने महिला भक्तजनको घुइचो लागेको हो । हजारौको संख्यामा महिलाहरु उपस्थित भएका थिए भने उनीहरुले पुजाआरधानसंगै विभिन्न तिज गितमा नाच्दै रमाएका थिए ।प्रस्तुत छ शंखपार्क स्थित हरितालीका तिजको अवसरमा ktmkhabar.com का फोटो पत्रकार शब्दित गुरुङले खिचे ...
विश्वका यि १० वटा खतरनाक सडकहरु, जहाँ मृत्युले कुरीरहेको हुन्छ (फोटोफिचर)
विश्वमा कयौं खतरनाक सडक छन्, जहाँ दुर्घटना दर निकै बढी पाइन्छ । भौगोलिक विकटताका कारण त्यस्ता सडकको यात्रा निकै जोखिमपूर्ण भएर पनि त्यहाँका बासिन्दाले दैनिक जीवनको अङ्गका रुपमा यात्रा गर्दै आएका छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले तयार पारेका सामाग्रीलाई आधार बनाएर यहाँ विश्वका १० खतरनाक सडकको चर्चा गरिएको छ । युन्गास रोड बोलिभियाको उत्तर युन्गास रोड करिब ६४ किलोमिटर लामो छ । यो सडक कच्ची हुनका साथै चिप्लो पनि छ । त्यसैले कयौं सवारी साधन ...
पोकेमन गोः जसको पछाडी दैनिक करोडौं दौडिरहेका छन्
काठमाडौं, साउन ११ । ‘मोबाइल गेम’ को दुनियामा ‘पोकेमन गो’ ले छोटो समयमा निकै लोकप्रियता हासिल गरेको छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा यो गेमप्रति युवा–युवतीको क्रेज देखिएको छ । सोशन नेटवर्किङ साइटमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ । ट्वीटरमा ‘पोकेमन गो’ ह्यास ट्यागमा करिब नौ करोड ट्वीट भइसकेको छ । त्यस्तै फेशबुकमा पनि यसले महत्व पाउन थालेको छ । यति लोकप्रिय भइसक्दा पनि यो गेम कसले बनायो भन्नेबारेमा विश्व नै भ्रममा थि ...
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिममा दिशा तर्फ रहेको एक प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर (स्तूप) स्वयम्भुनाथ रहेको छ । विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत रहेको स्वयम्भुनाथमामा अहिले आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटनको ठूलो मात्रामा घुइँचो लाग्ने गरेको छ । स्वयम्भुबाट राजधानीको सेरोफेरो चियाउन सकिन्छ । राजधानीको दृष्यावलोकनको लागि पनि दैनिक हजारौ मानिसहरु स्वयम्भुनाथ पुग्ने गर्छन । अझ त्यहाको हरियालि दृश्य, चराचुरुङ्गि तथा बन्यजन्तुले मान्छेलाई आकर्षण गर्छ ।अवको क्रममा प् ...
काठमाडौँ भित्र लुकेको कथा (फोटो फिचर)
शालिक भट्ट काठमाडौँ । संसारी माया विचित्र ! पक्कै पनि यो संसार विचित्र कै छ भनौँ अथवा फरक छ । फरक संसार मध्येको एउटा अर्को ठाउँ हो काठमाडौँ । जहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यका साथै विभिन्न रिति रिवाज, भेषभुषा, संस्कृति रहनहन पनि फरक फरक छन् । कोही विहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्थामा छन् त कोहीलाई सबै कुराको पनि भरिपूर्ण छ । देशको राजधानी काठमाडौँ जहाँ अत्यन्तै न्यून स्तरका व्यक्तिहरू देखि उच्च स्तरका व्यक्तिहरुसम्म बसोबास गर्दछन् । सुटबुट लगाएर ठा ...
डा. केसीको समर्थनमा यसरी प्रदर्शन गरियो (फोटोफिचर)
२ साउन, काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवामा रहेको अनियमितताकाविरुद्धमा अनशनरत् प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ । डा. केसीको मागमा समर्थन र सांसदहरुलाई दबाब दिने उद्देश्यले स्वतन्त्ररुपमा नागरिक प्रदर्शनी भएको हो । माइतीघरमन्डलाबाट सुरु भएको र्‍याली नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेको थियो । प्रदर्शनमा सहभागी हुन सामाजिक सन्जालमार्फत् अभियान सुरु गरिएको थियो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले केसीको पक्षमा लेखिएका ...
"हाम्रो देश हाम्रो बोली, आई एम विथ केपी वली" भन्दै उर्लीए स्वतन्त्र युवाहरु (भिडयो)
३१ असार, काठमाडौँ । एमाओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता माग्दै स्वतन्त्र युवाहरुको समुह भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा दिउसो ३ बजेबाट सडकमा उत्रिएका छन् । समृद्धिका लागि युवा अभियानले राजनीतिमा स्थिरताका लागि ओली सरकारको निरन्तरताको हुनुपर्ने माग राख्दै युवा लहर चलाएका छन् । सत्तामोह छोड, देश विकासमा जोड, युवाको एउटै बोली आई एम वीथ केपी ओली लगायतका प्लेकार्ड बोकेर युवाहरुले नारा लगाए ...
सामाजिक संजालमा भाईरल फोटाहरु, जसले ओली सरकारको निरन्तरता चाहेका छन् !
३१ असार, काठमाडौँ । अकस्मात टुट्न लागेको के पी ओली सरकारलाइ व्यग्यत्मक तरिकाले सपोर्ट गर्नेहरुले बजार निकै तताएका छन् । नाकाबन्दीको समयमा ओलीले जुन राष्ट्रियता देखाए त्यसले पनि उनको समर्थक बढेको भन्नेहरु पनि यत्रतत्र पाइन्छ । यसका बाबजुद नेपालमा राजनीतीक स्थाइत्व रहोस् भन्नेहरु पनि ओली सरकारको निरन्तरताका लागी व्यग्यत्मक समर्थनमा लागेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्ड र ओलीलाई जनताले समर्थन तथा विरोध गरेका फोटाहरु देख्न सकिन्छ । ...
यसरी मनाइयो इद उल फित्र (फोटोफिचर)
२३ असार, काठमाडौँ । एक महिना रोजा व्रत सकिएपछि इस्लाम धर्मावलम्बी मुसलमानले बिहीबार (इद इद उल फित्र) मनाएका छन् । काठमाडौंस्थित कश्मीरी तकिया, नेपाली जामे मस्जिदसहित देशभरका मस्जिदमा बिहान इदको नमाज पढेपछि शुभकामना आदान प्रदान गर्दै मुसलमानहरूले खुसियाली मनाए । इद खुसी साट्ने पर्व हो र तीन दिनसम्म मनाइन्छ । एक महिनासम्म रोजा बसेपछि इदको दिनमा खुसियाली साट्ने, आफन्तलाई बोलाएर भोजन गराउने, दान गर्ने प्रचलन छ । मस्जिद वा इदगाह (इदको नमाज पढ्न बनाइएक ...
बौद्ध स्थित बौद्धनाथ स्तुपाको पुनःनिर्माण गरिदै (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । वैशाख १२ को महा भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको बौद्धनाथ स्तुपाको पुनःनिर्माण कार्य सुरु भइरहेको छ । भूकम्पका कारण स्तुपाको माथिल्लो १३ स्टेप क्षतिग्रस्त बनाएपछि हाल पुनःनिर्माण गर्न लागिएको हो । युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धनाथ स्तुपा दन्तेकथाकी ज्याजिमा नामकी अप्सराले धर्ममा रुचि राख्ने चार छोराहरुलाई जमिन उपलब्ध गराएपछि निर्माण कार्य सुरु भएको किंवदन्ती छ । हात्ती, घोडा र गधालाई माटो, ढुङगा, इँटा बोकाएर सो स्तुपा सात वर ...
तरकारीको भाउमा लाइसेन्सको व्यापार, वाग्मतीमा मात्र ४० हजार नक्कली लाइसेन्स
१४ असार, काठमाडौं । प्रहरीले जति नै कडाइ गरेको बताएपनि नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को व्यापार रोकिन नसकेका तथ्य फेला परेका छन् । अहिले पनि ‘तोकिएको शुल्क तिर्नुस् घरदैलोमै लाइसेन्स लिनुस्’को शैली कायमै रहेको देखिएको छ । चोरका सय दाउ भने झैं नियमनकारी निकायले अवैध धन्दा नियन्त्रणका लागि एउटा योजना शुरु गर्न नपाउ“दै दलालहरूले अनेकौं जुक्ति अपनाइसक्ने गरेको पाइएको छ । बजारमा अझै पनि नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र छ्यापछ् ...
यस्तो देखियो काठमाडौँमा विप्लव माओवादीको बन्दको प्रभाव (फोटो फिचर)
२७ जेठ, काठमाडौँ । आफ्नो कार्यकर्ताको रिहाइको माग गर्दै विप्लव नेतृत्वको माओवादीले गरेको बन्दको प्रत्यक्ष प्रभाव देशैभर परेको छ । निजि यातायात र साझा बस बाहेक अन्य कुनै पनि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चलेका छैनन् । बन्दको कारणले उपत्यकाको फोहोर पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । माओवादीको बन्दको कारण यात्रुहरूलाई आवतजावत गर्न असहज भएको छ । फोटो: नरेश भण्डारी/ktmkhabar.com ...
भाइटीकासम्म यस्तो बन्नेछ रानीपोखरी, हेर्नुहोस्
काठमाडौं । भूकम्पले क्षति पुर्याएको रानीपोखरी मन्दिर भाइटीकासम्म पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले काम अगाडी बढिरहेको छ । काठमाडौ महानगरपालिकाले रानीपोखरीलाई “म्युजिकल वार फाउन्टेन” पार्कको रूपमा स्थापित गर्ने भएको छ । मन्दिर पुरानै संरचना अनुसार पुननिर्माण गरिने भएपनि आसपासको क्षेत्र पार्कका रुपमा विकसित गर्न लागिएको हो र अहिले पोखरी खाली गरिसकिएको छ । महानगरपालिकाले रानी पोखरीलाई पार्क बनाउन लागेको इन्जिनियर उत्तरकुमार रेग्मीले ...
प्रधानमन्त्री मैदानमा ओर्लिए पछी....... (फोटो फिचर)
काठमाडौं- आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली दशरथ रंगशालामा फरक रुपमा देखिए। ओलीले रंगशालामा फुटवल खेलाडीको जर्सी मात्र लगाएनन् मैदानमा उत्रेर फुटवल समेत खेले। प्रधानमन्त्री ११ र मुख्यसचिव ११ बीच भएको मैत्रिपूर्ण फुटवल खेलमा प्रधामन्त्री ओली यसरी खेले। हेर्नुहोस् केशव थोकरले खिचेका तस्बिरहरु: - ...
बहिनीको अन्त्येष्टिमा बिमलले आफूलाई सम्हाल्न सकेनन् (फोटो)
काठमाडौँ, १५ जेठ बुधबार राति नवलपरासीस्थित आफ्नै घरमा घाँटीमा निलडामसहित मृत अवस्थामा फेला परेकी राष्ट्रिय फुटबलर विमल घर्ती मगरकी बहिनी मनिषा घर्तीको शुक्रबार साँझ पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । विहीबार उनको शवलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो र शुक्रबार शिक्षण अस्पतालमा शव पोस्टमार्टमपछि मनिषाको आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो । बेल्जियममा उपचार गराउन गएका बिमल बहिनीको मृत्युको खबर सुनेपछि शुक्रबार नेपाल आएका थिए । बहिनीको अन्तिम बिदाईमा बिमल आफूलाई ...
एजेन्सी - अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट बाराक ओबामाले दुई कार्यकाल पुरा गरि सन् २०१७मा उनी ह्वाइट हाउसबाट बाहिरिदैछन् । अधिकांश अमेरिकी राष्ट्रपति ह्वाइट हाउसबाट बाहिरिएपछि राजधानी वासिंटन बाहिर रहेर आफ्नो नीजि जीवन बिताउँदै आएका भए पनि ओबामा भने राजधानी मै रहने भएका छन् । छोरीको पढाई पुरा नभएका कारण उनी राजधानी मै बस्ने भएका हुन् । ओबामाका लागि बस्ने घरको बन्दोबस्तसमेत भइसकेको छ । वासिंटन डिसीको उत्तरपश्चिममा रहेको क्यालोरेमा एरियास्थित एउटा घर ओबामा पर ...
सलमानको फार्म हाउस (तस्बिर सहित)
एजेन्सी - बलिउड अभिनेता सलमान खानले सञ्चालन गरेको मुम्बईको पनवेलस्थित फार्म हाउस विभिन्न पार्टी तथा सामाजिक संघसंस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमका लागि चर्चित छ । सलमानले खेलेको सुपरहित फिल्म ‘बजरंगी भाइजान'का केही दृश्य पनि उनकै फाम हाउसमा शूट गरिएको थियो । पनवेलमा रहेको सलमानको यो फार्म हाउसको नाम अर्पिता फाम्र्स राखिएको छ । अर्पिता उनकी बहिनी हुन् । यो फार्म एक सय ५० एकर्ड क्षेत्रफल भएको जमिनमा अवस्थित छ । ...
उपत्यकामा सवारी जामको समस्या बढ्दो, व्यवस्थापन कार्य जटिल एंव चुनौतीपूर्ण बन्दै
काठमाडौ उपत्यकामा सवारी जामको समस्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । काठमाडौका बिभिन्न स्थानमा सडक फराकिलो त भयो तर समस्या भने ज्युँका त्युँ छन । तत्काल यसको न कुनै समाधान देखिन्छ न त कूनै बिकल्प नै खोजिएको छ । त्यसैले पनि उपत्यकाको जामबाट सवारी प्रयोगकर्ताहरु दिक्क हुन थालेका छन् । उपत्यकामा ट्राफिक जामको समस्या पुरानो होईन । तर यो समस्या दिनानु दिन बढ्दै छ । एकातिर उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढ्दै छ भने अर्कोतिर साँघुरा सडकहरुका कारण यात्रुहरुले यो समस् ...
पोर्न स्टार बन्छु भनेर चिताएकी पनि थिइनँ : सन्नी लियोनी
भारतीय मूलुकी क्यानेडियन अभिनेत्री हुन्, सन्नी लियोनी । भारतमा मात्र नभएर विश्वमा नै उनको ठूलो ‘चार्म’ छ । सन् २०१५ मा उनी भारतबाट गुगलमा सबैभन्दा बढी खोजिएको व्यक्तिमा दरिएकी थिइन् । भारतीयहरूले गुगलमा उनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भन्दा बढी खोजेका थिए । तर, उनी सानी छदाँ पोर्न स्टार बन्छु भन्ने कल्पनासमेत गर्दिनथिन् । ‘सानी छदाँ मेरो चाहना अर्कै थियो । म नर्स अथवा डाक्टर बन्न चाहन्थेँ । पोर्न स्टार बन्छु भनेर चिताएकी पन ...
२५६०औँ बुद्ध जयन्तीमा बौद्धमा जे देखियो (फोटो फिचर)
जेठ ९ - काठमाडौं वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन शनिबार देशभर २५६०औँ बुद्ध जयन्ती बुद्धप्रति आस्था प्रकट गर्दै मनाइयो। २५६०औँ बुद्ध जयन्ती मनाइरदा काठमाडौंका बिभिन्न बौद्ध स्तुपाहरुमा बौद्ध धर्माबलम्बीहरुको भिड थियो । समाचार संकलनको लागि हामि काठमाडौंको बौद्ध पुगेका थियौ। बौद्धमा जे देखियो हेर्नुहोस् फोटो फिचर । शनिबार २५६० औ बुद्ध् जयन्तीको अबसरमा बौद्ध जे देखियो । ...
तुइनबाट गाडी तारियो
जेष्ठ ८, २०७३- जाजरकोट डोल्पा सडकको तल्लुबगर स्थित भेरी नदीमा तुइनको सहयोगबाट यातायातका साधन वारपार गराउन थालिएको छ । जाजरकोटको तल्लुबगर र रुकुमको छहरीबगर विचको भेरी नदीमा तुइनको सहायताले जीप, ट्याक्टर लगायतका सवारी साधन वारपार गराइएको छ । सेनाको जाजरकोट-डोल्पा सडक निर्माण कार्य दल र रुकुम गोतामकोटका स्थानीयको संयुक्त सक्रियतामा तुइन निर्माण भएको हो । गोतामकोटका कमल थापा, यज्ञ खड्का, प्रकाश खड्का, दरीमान बस्नेत, यज्ञ जिएम लगाएत १३ जन ...
यी लक्ष्मी र श्वेता जसले दृष्टिविहीन भएर पनि पीएचडी गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पस्तुत गरेका छन्
८ जेठ, काठमाडौं। अध्ययन, अनुसन्धान गर्न आँखाको दृष्टि नै चाहिन्छ ? चाहिँदैन । मन र आँट भएमा सुनेर पनि विद्यावारिधि पूरा गर्न सकिँदो रहेछ । इच्छा र जाँगर भए आँखाले हेरेर भन्दा कानले सुनेर गर्ने उच्च अध्ययन सर्वाेत्कृष्ट हुँदो रहेछ । दृश्यविहीन दुई नारीले विद्यावारिधि पूरा गरी नयाँ इतिहासको रचना गर्नुभएको छ । लक्ष्मी पोख्रेल र श्वेता सिंहले आफ्ना नामका अगाडि डा थप गरी आफ्ना नामका अगाडि झुन्डिएका दृष्टिविहीन भन्ने शब्द सदाका लागि अन्त्य गरिदिए ...
जेठ ७ - नेपाल भारतको सम्बन्ध फेरी एकपटक खराब चरणबाट गुज्रिरहेको छ। नाकाबन्दी सकिएपछि नेपालको तर्फबाट सामान्यीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्थ्यो, भारतको तर्फबाट पनि हुनुपर्थ्यो। दुबै देशले नाकाबन्दीलाई नराम्रो सपनाजस्तो मानेर सम्बन्ध सामान्य बनाउनुपर्थ्यो। भारतीय मित्रहरुले जे गरियो ठीक गरिएन भन्ने अनुभूति गरेकै छन्। नाकाबन्दी पछि दुबैले आ-आफ्नो यथार्थता बुझिसकेको अवस्था हो। त्यसपछि सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर लैजानु पर्ने चुनौती दुबै मुलुकलाई थि ...
मेरो नशा−नशामा फुटबल छ : गणेश थापा
‘झण्डै ३५ वर्ष फुटबलमा बिताएँ, अहिले विभिन्न कारणले फुटबल भन्दा बाहिर रहेपनि मेरो नशा−नशामा फुटबल रहेको छ ।’ २२ वर्ष एन्फाको नेतृत्व हाँकेका गणेश थापा अहिले आर्थिक अनियमितताको अभियोगमा फुटबलको अन्तराष्ट्रिय निकाय फिफाको निलम्बनमा परेका छन्, त्यो पनि १० वर्षका लागि । देशभित्रसमेत आर्थिक अनियमितिको आरोपमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्मको छानबिनमा परे थापा । तर, आरोपको पुष्टि स्वदेशभित्र हुन नपाउदै ...
६८ वर्षीय एक वृद्ध कक्षा १० मा
जेठ ६- स्याङजाको फेदीखोला–१ खड्केटारीको एक विद्यायलमा ६८ वर्षीय एक वृद्ध कक्षा १० मा अध्ययन गर्दैछन्। खडेकेटारीमा रहेको कालाभैरव उच्च माविको कक्षा १० मा दुर्गाबहादुर विक पढिरहेका छन्। स्याङजाको फेदीखोला–३ देउराली घर भएका विक कक्षा ६ बाट सो विद्यालयमा पढ्दै आएका छन्। ‘सानो उमेर छँदा परिवारको आर्थिक स्थिति कमजोर थियो,’ विकले भने, ‘त्यसैकारण पढ्ने इच्छा पूरा गर्न बुढेसकालमा स्कुल जान थालेँ।’ ६ जना सन्तानका बाबु तथ ...
फ्रान्समा देखियो किमको सुन्दरता, हेर्नुहोस् तस्विर सहित
एजेन्सी - आफ्नो प्राइभेट जेटमा करिब ८ घन्टाको यात्रा गरेर विश्व चर्चित रियालिटी स्टार किम कार्दशियन फ्रान्स पुगिन् । करिब ८ घन्टाको यात्रा गरेपनि उनको अनुहारमा कुनै थकान देखिएन । किमको चमक, सुन्दरता र पहिरनले सबैको ध्यान खिच्यो । मंगलबार बेलुकी फ्रान्समा आयोजित पार्टीमा पुग्नका लागि किमले न्यूयोर्कबाट ८ घन्टाको प्राइभेट जेट यात्रा गरेकी थिइन् । ३५ बर्षकी २ सन्तानकी आमा किमको पहिरन र सुन्दरताले पार्टीमा सर्वाधिक चर्चा पाएको थियो । किमले लगाएक ...
धुर्मस-सुन्तलीलाई सहयोग गर्न तातेनन् युरोपवासी नेपाली
बार्सिलोना । युरोपमा रहेका बिभिन्न राजनीतिक, क्षेत्रीय, जातीय संघसंस्थाहरुले बिभिन्न कार्यक्रम, बैठक, सम्मेलनको नाममा हजारौ युरो खर्च गर्न अघि सर्छन् । तर हास्य कलाकार धुर्मस-सुन्तलीले सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चौरमा बनाउन लागेको नमुना एकीकृत वस्तीका लागि भने एकमुष्ट सहयोग पठाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म बेलायत, साइप्रस, नर्बे र स्पेनका गरी ४ जना नेपालीहरुले मात्र सहयोग गरेका भए पनि सिंगो युरोप नै भने मौन देखिएको छ । हजारौ नेपाली संघसंस्था रहेको युरोप ...
मदन भण्डारीलाई सम्झदा....... फोटोहरु
जेष्ठ ३, २०७३- २०५० जेठ ३ अर्थात आजकै दिन चितवनको दासढुंगामा भएको एउटा चर्चित ‘दुर्घटना’ हत्या हो वा होइन भन्ने यकिन नभएर अझै पनि ‘रहस्यमय’ छ । ताप्लेजुङको हाङदेवामा देवीप्रसाद भण्डारी र माता चन्द्रकुमारीको माहिला छोराका रूपमा २००९ असार १४ गते जन्मेका मदन भण्डारीले अल्पायुमै संसार छाडे पनि नेपाली राजनीतिमा एउटा बेग्लै आकर्षक व्यक्तित्वका रुपमा छाप छाडे । जनआन्दोलन २०४६ मा बाममोर्चाबाट सकृय रहेका भण्डारीले नेपाल कम्युनिष्ट ...
शिवशक्ति आचार्य काठमाडौँ, २ जेठ — शनिबार सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका ८ गिरानचौर स्थित धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माणाधिन एकिकृत नमुना वस्ती पुग्दा अलिक फरक दृश्य देखिन्थ्यो । सांसददेखि स्थानीय नेता कार्यकर्तासँगै रिपोर्टिङका लागि त्यहाँ पुगेका पत्रकार सम्ममा एउटा समानता थियो, उनीहरू सबै धुर्मुस सुन्तली एकिकृत नमुना बस्तीका लागि श्रमदान गरिरहेका थिए । दृश्य नै यस्तो थियो त्यहाँ की हरकोही स्वस्फुर्त श्रमदान गरिरहेका थिए । ...
रत्नपार्कको फ्रि वाइफाइमा रमाउदै युवायुवती (फोटो)
काठमाडौँ, ४ बैशाख — ४२ रोपनि जग्गामा फैलिएको रत्नपार्कमा यहि चैत ६ गतेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले ६ ओटा डिभाइसको साथमा फ्रि वाइफाइ सेवा सुरु गरेको छ । फ्रि वाइफाइको सुविधासंगै वाइफाइको मज्जा लिन अहिले रत्नपार्कमा युवायुवतीको ठुलै जमात देख्न सक्छौ । गत असार १५ बाट शशुल्क प्रवेश सुरु भएको रत्नपार्कमा अहिले वाइफाइको सुविधा लिन दिनभरि जसो नै युवायुवतीहरु फोटो खिच्न, सामाजिक संजालमा रमाउनमा नै ब्यस्त देखिन्छन् ।रत्नपार्क प्रबेशका लागि भने बिद्या ...
काठमाण्डौ - एकजना मानिस ज्यादै उदास र निराश भएर बसिरहेको थियो । मेरो विचारमा त्यो व्यक्ति यति धेरै रोइसकेको थियो,उसको वरिपरि के छ भनेर सम्म उसलाई ख्याल थिएन । रोकिई–रोकिई उसका आँखामा आँसु बहन लागेको थियो । सामुन्ने उभिएको एउटा दार्शनिकले निकै अगाडी देखि उसलाई हेरिरहेको थियो । ती दार्शनिक त्यस व्यक्ति नजिकै गई निकै प्रेम पुर्वक सोध्न थाले–“तिमिलाई के भएको छ ?“म धेरै दुःखी छु” उसले भन्यो ।“किन ?दार्शनिकको प्रश्न थियो“मैले घर धनीको भाडा पनि तिरेको ...
माघसंग कोइरालाको संयोग : प्रधानमन्त्री चयन र अन्त्येष्टि एकै दिन
२७ माघ, काठमाण्डौँ - स्वर्गिय शुशिल कोइरालाको माघ महिनासंग गजबको संयोग जोडिएको छ । २०१२ माघमा बिरगंजमा सम्पन्न छैठौ माहाधिबेशनमा उनी सहभागि भएका थिए, त्यस यता संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रि चयन, निधन र पार्टिका विभिन्न गतिबिधीमा माघ महिनाको संयोग जोडिएको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा कु गरेपछि उनी तिन महिना नजर बन्दमा परे, १२ माघ २०७० मा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए भने उनै कोइराला २७ माघ २०७० मा नेपालको ३७ औ प्रधानमन्त्रि ...
सुशील कोइरालाः मृत्युले झुक्यायो, अस्पताल नै जान पाएनन् (जीवनीसहित)
काठमाडौं - २०१० सालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय कोइराला २०३६ सालमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । ०४२ सालको सत्याग्रहदेखि ०४६ र ०६२/६३ को आन्दोलनमा कोइरालाले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट रहेर काम गरेका सुशील पार्टी केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री, उपसभापति, कार्यवाहक सभापति हुँदै पार्टीको सर्वोच्च पद सभापति भएका थिए । मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहोरात्र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका कोइराल ...
नेपालले जित्यो कास्यसहित तीन पदक (फोटो फिचर)
२४ माघ,काठमाडौं । भारतको गुवाहाटीमा जारी १२ औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग)मा नेपालले रजतसहित तीनवटा पदक हात पारेको छ। सागको दोस्रो दिन शनिवार गुवाहाटीमा भएका विभिन्न तीन स्पर्धामा नेपालले रजदसहित दुईवटा कास्य पदक हात पारेको हो। नेपालका लागि भारोत्तोलनमा विकास थापाले रजत पदक हात पारे। १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाललाई रजत पदक दिलाउने क्रममा भारोत्तोलनका थापाले ६३ केजी तौल समूहको स्पर्धामा रजत पदक दिलाएका हुन्। थापाले स्न्याचमा १ ...
विनोद चौधरी र फोर्ब्सका सिइओ रारा ताल पुगेपछि… (फोटो कथा)
काठमाडौं । जतिसुकै व्यस्तताका बावजुद पनि अर्बपति विनोद चौधरी बर्षको एकपटक ट्रेकिङमा निस्किन्छन् । उनको ट्रेकिङको रोजाई हुन्छ, नेपालका प्राकृतिक वैभवले भरिपूर्ण हिमालय क्षेत्र । यसपटक उनले रोजे, रारादेखि शे-फोक्सुण्डोसम्मको यात्रा । यस पटक चौधरीको ट्रेकिङ अघिल्ला बर्षहरुको भन्दा झनै बिषेश किन थियो भने उनीसँगै थिए, विश्व विख्यात फोर्ब्सका प्रमुख कार्यकारी माईक पेलिस र उनकी श्रीमती मिसी । विश्वका अर्बपतिहरुको बारेमा लेख्ने फोर्ब्स पत्रिकाले नै चौधरी ...
काठमाडौं । सगरमाथामा स्काई डाइभिङ ! सुन्दै आङ सिरिङ्ग भएर आउँछ । कहिल्लै नसोचेको शाहसिक खेल स्काई डाइभिङको अनुभव बटुल्ने अवसर मिल्यो । विश्वकै सबैभन्दा साहसिक खेलका रुपमा परिचित स्काई डाइभिङ नेपालमा एक्स्पोलोर हिमालयले गर्दै आएको छ । एक्स्पोलोर हिमालयले वर्षको एक पटक सगरमाथामा र एक पटक पोखरामा स्काई डाइभ गराउँछ । म अहिले एउटा ट्राभल शो बनाउँदै छु । ट्राभल शोमा विभिन्न सातवटा इपिसोड रहनेछन् । जसमध्ये पहिलो इपिसोडमा शाहसिक खेल समावेश गर्न ...
भूकम्पले मरेको छैन सगरमाथाको सुन्दरता (फोटो फिचरसहित)
विश्व प्रशिद्ध सगरमाथा (खुम्बु) पदमार्ग भूकम्पपछि पनि उस्तै छ । सगरमाथाको सुन्दरतामा भूकम्पले कुनै दाग लगाउन सकेको छैन । अहिले मुख्य पर्यटकीय मौसम हो । यतिबेला सगरमाथा क्षेत्रका होटल तथा डाँडाकाँडा पर्यटकले भरिभराउ हुनुपथ्र्यो । तर, विनाशकारी भूकम्प र लगातारको बन्द हडतालका कारण पर्यटकको उपस्थिति न्यून देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत पनि पर्यटक सगरमाथा नआएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । तर, भूकम्पपछि पनि सगरमाथा क्षेत्र सुरक्षि ...
धोविघाटबाट देखिएका अपार्टमेन्ट ९ असोज, काठमाडौं । कंक्रिटको जंगल मात्रै होइन काठमाडौं । यहाँ धुवाँ, धुलो र कोलाहलको राज मात्रै छैन । भागदौडको जिवनबाट थकित भएर अलिकति रोमान्चकता खोज्नेहरुका लागि पनि थुप्रै मौकाहरु उपलब्ध छन् यहि ‘निरस’ शहरभित्र । जब दिन ढल्दै जान्छ, काठमाडौं आफसेआफ रोमान्टिक बन्दै जान्छ । बेलुकीपख रातो सूर्यको किरणले शहरको एक दिन समाप्त हुन लागेको संघघोष गरिदिन्छ । त्यसतिबेला चन्द्रागिरी चुचुरोबाट मज्जाले सूर्य ...